खाडीका युवा सम्झ“दै पाका मतदाता - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 खाडीका युवा सम्झ“दै पाका मतदाता
खाडीका युवा सम्झ“दै पाका मतदाता
Marganugamidaily प्रकाशित समय 2:34:00 AM
सिरहा, १८ मंसिर । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले पठाएको ‘रेमिट्यान्स ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दुईमत छैन । वैदेशिक रोजगारीकै आडमा समाजमा सामाजिक विकृति पनि बढ्दो छैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ । देशभरबाट दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम जारी रहँदा देशभित्र हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण निर्वाचनमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ।अहिले तराईका जिल्लामा बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चहल पहल बढ्दो छ ।
तर, त्यो चहल पहलमा युवाको उपस्थिति भने अत्यन्तै न्यून छ । ‘देश विकासमा युवाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचनको संघारमा देशको नेतृत्व सम्हाल्न अगाडि आउनुपर्ने युवा भने खाडी राष्ट्रमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । देशकै लागि यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो, सिरहा सदरमुकामका बुद्धिजीवी अनिरुद्र ठाकुर भन्छन् । आर्थिक वर्ष ०६७र६८ देखि ०७३र७४ को वैशाख मसाप्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सिरहाबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ९४ हजार दुई सय ७५ छ । तीमध्ये पुरुष ९४ हजार एक सय ४४ र महिला एक सय ३१ छन् । यो सरकारी तथ्यांक मात्र हो । यस बाहेक गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरमा भौंतारिइरहेका युवाको संख्यासमेत जोड्दा तथ्यांक अझ गम्भीर बन्न सक्छ । ‘जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिबी छ, रोजगारीको अवसर छैन । अधिकांश जनतालाई हातमुख जोड्नै समस्या छ । यस्तो स्थिति मा यहाँका युवासँग जीवन धान्न मलेसिया र खाडी राष्ट्रतर्फ होमिनुको विकल्प छैन, ठाकुर भन्छन् । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दलले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा युवा पलायनलाई रोक्ने प्रभावकारी उपाय अघि सार्न नसकेको ठाकुरको आरोप छ । ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेत युवा पलायनलाई रोक्ने स्पष्ट योजना छैन । जबसम्म राज्य ठोस र प्रभावकारी योजनासहित अगाडि आउँदैन तबसम्म हाम्रा गाउँघर युवाविहीन रहने निश्चित छ, उनी भन्छन् । ठाकुरको विचारमा युवा वर्ग समय र समाज सँगसँगै अगाडि बढेका हुन्छन् । उनीहरूमा विकास र परिवर्तनको चाहना पनि बढी हुन्छ । यसैगरी, आफ्नो राष्ट्र, समाज र राजनीतिबारे विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता पनि बोकेका हुन्छन् युवाले । ‘देश विकासका लागि त युवा नै राजनीतिमा आउनुपर्छ तर हाम्रो विडम्बना, देश चलाउने नेता छान्नसमेत युवा गाउँघरमा छैन, उनी भन्छन् । सिरहा नवराजपुर–२ का जयनाथ यादव पनि दल र तिनका उम्मेदवारले युवा पलायन लाई रोक्ने प्रभावकारी योजना अघि सार्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘गाउँघरको समस्या एउटा छ, हाम्रा नेता अर्थ न बर्थका आश्वासन बाँडेर हिँड्छन, यादव भन्छन, ‘युवा निरास छन, हामीजस्ता बेरोजगार युवा रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकार को खोजीमा छौं । खाडी मुलुक हाम्रै युवाशक्तिको भरमा धनी÷ सम्पन्न बन्दै छन् तर हाम्रो सरकार र राजनीतिक दललाई भने युवाशक्ति बिदेसिएकामा कुनै चिन्ता छैन । यसैगरी, सिरहा इँटाटारका धर्मेन्द्र पासवान जन्ती र मलामी जाने युवासम्म गाउँमा पाउन छाडिएको दुखेसो पोख्छन्। ठूलो संख्यामा युवाको पलायनका कारण नै समाजमा विभिन्न खाले विकृति बढ्न थालेको र विकराल समस्याका रूपमा देखिएको बेरोजगारीका कारण युवा बाध्यता ले आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि उनको ठम्याइ छ । ‘देश बनाउनुपर्ने युवा खाडीमा छन, जोस जाँगर सकिएका प्रौढहरू देश चलाउने नारा बोकेर मत माग्न घरघर चहार्दै छन् । गाउँघरमै भएका केही युवा पनि विरक्तिएर लागुऔषधको कुलतमा फसेका छन् । यही हो, हाम्रो देशको यथार्थ, धर्मेन्द्र गुनासो गर्छ, ‘यो निर्वाचनमा मत खसाल्न त बूढापाका र महिला मात्र गाउँ घरमा छन् । उनी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छन् रे, ‘तपाइँहरू पालैपालो देश हाँक्छ तर, यहाँका युवाले किन रोजगारी पाउन सकेनन् ? जिल्लामा किन एउटा पनि उद्योग स्थापना हुन सकेन ? गाउँघरमा बाँकी रहेका युवाले तपाइँहरूलाई भोट किन दिने? सिरहा राजपुरका वीरेन्द्र यादव युवा शक्तिका लागि देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना अब समृद्धिको लडाइँ लड्न सरकार र राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाव दिन चाहन्छन् । ‘मधेसका जिल्लामा बन्द रहेका उद्योग र कलकारखाना लाई मात्रै पनि सरकारले सञ्चालन मा ल्याउन सक्यो भने लाखौं युवाले रोजगारी पाउँछन् । देशमा बन्द, हडताल, नाकाबन्दी र द्वन्द्व पनि धेरै भयो । अब युवा शक्तिलाई अघि सारेर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन, वीरेन्द्रको सुझाव छ ।अन्नपूर्ण पोष्ट बाट सभार